ကမ္ဘာအန္တရာယ်အရှိဆုံး ရုရှားသူလျှို မိန်းမလှလေး RED SPARROW ရုပ်ရှင် - Yangon Media Group
ဒါရိုက်တာ – ဖရန့်စစ် လောရန့်စ်
ဇာတ်ညွှန်း – ဂျက်စတင် ဟေသီ၊ ဂျက်ဆင် မက်သရူး
သရုပ်ဆောင် – ဂျန်နီဖာ လောရန့်စ်၊ ဂျိုအယ် အက်ဂါတန်၊ မက်သီယက်စ် စကိုနတ်စ်
ပြသချိန် – ၁၃၉ မိနစ်
နိုင်ငံ – အမေရိကန်
ယခုသီတင်းပတ်မှစတင်ကာ နိုင်ငံတကာရှိ ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် စတင်ရုံတင်ပြသမည့် သည်းထိတ်ရင်ဖို ထောက်လှမ်းရေး ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
ဘဲလေးအကမယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့သည့် အိပ်မက်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီး ရုရှား ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ပြီး စီအိုင်အေ အရာရှိတစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်ခိုင်းရာမှ နှစ်နိုင်ငံအကြား တင်းမာမည့်အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပုံကို သည်းထိတ်ရင်ဖို ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။
ပရီမာဘယ်ဘာရီနာဒိုမီနီကာ အီဂေါရိုဗာသည် ဒဏ်ရာတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဘဲလေးအကမယ် တစ်ဦးဖြစ်ချင်သော အိပ်မက်ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသည်။ ယင်းနောက် လူငယ်တို့၏ စိတ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်များကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုနိုင်ရန် ထိန်းကျောင်း သင်ကြားပေးသည့် လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး ဌာနတစ်ခုဖြစ်သည့် Sparrrow ကျောင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အီဂေါရိုဗာသည် အရက်စက်ဆုံး လေ့ကျင့်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် အန္တရာယ်အကြီးဆုံး Sparrow တစ်ဦးအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၄င်း၏ အစွမ်းအစနှင့်အတူ ရပ်တည်ရင်း အီဂေါရိုဗာသည် သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်ရသူဟု ဆိုသော စီအိုင်အေဂျင့်တစ်ဦးနှင့် ဆုံစည်းမိပြီး နှစ်ဖက်ချွန် သူလျှိုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တော့သည်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ယနေ့အထိ မခံစားရသေးဟု ပြ?
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတဟောင်း၏ သမက် နေအိမ်နှင့် ရုံးခန်းကို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သံသယရှိ၍ အစိုးရ အမှုစ?
မြန်မာလုပ်သားကိုသာ ဗီဇာကြေး အဆမတန် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့် ထိုင်းအစိုးရ၏ အစီအစဉ်ကို ပြန်လည် ညှိနှိုင်းမည်